चीन उदयको अन्तर्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चीन उदयको अन्तर्य
भाद्र २८, २०७६ रमेश के.सी.
नयाँ शीतयुद्ध ? हो, चीन र अमेरिकाबीच अहिले व्यापार र प्रविधिको विषयलाई लिएर नयाँ शीतयुद्ध चलिरहेको छ । पहिलेको जस्तो यो शीतयुद्ध वैचारिक छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी अमेरिका र साम्यवादी सोभियत संघबीच चलेको शीतयुद्धले सन् १९६२ मा क्युबा मिसाइल संकटको बेला विश्व ध्वस्त हुने भय थियो । तर त्यो टर्‍यो ।
के अमेरिका र चीनबीच पनि त्यस्तै संकट आउन सक्छ ? अहिले प्रविधि र व्यापारमा देखिएको द्वन्द्वपछि सैन्य तनावको रूपमा पनि प्रकट हुनसक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू बताउँदैछन् । अहिले जापान र दक्षिण कोरियामा सैन्य अखडा राखेर प्रशान्त शक्ति बनेको छ, अमेरिका । सन् २०३० सम्म अमेरिकाको समकक्षी शक्ति हुने लक्ष्य चीनले राखेको छ ।
यदि यसो भयो भने विश्व व्यवस्थाको अवस्था के हुन्छ ? के विश्वशक्ति एसियातर्फ सरेर अमेरिका–युरोप क्षयतर्फ जाने छ ? अहिलेको यो पेचिलो प्रश्न हो । अमेरिकी भूराजनीतिका विशेषज्ञ रोवर्ट काप्लानका अनुसार विश्व राजनीतिमा विचारधाराको युद्धपश्चात भूराजनीति फर्किएको छ । भनिन्छ, उन्नाइसौं शताब्दी बेलायतको थियो । २० औं शताब्दी अमेरिकाको भयो । र एसियाको उदय एक्काइसौं शताब्दीमा विशेष गरेर चीनलाई केन्द्रमा राखेर हुनेछ भनी अर्का विद्वान पराग खन्ना बताउँछन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालाई जसरी सोभियत संघले चुनौती दिएको थियो । अहिले त्यस्तै चुनौती चीनले दिनथालेको छ । पात्र र समय परिवर्तन भएका छन् । घटना त्यस्तै छ । सन् १६४८ मा स्थापित पश्चिमा केन्द्रित र त्यसपछि विकसित वेष्टफेलियन विश्व प्रणाली अहिले असान्दर्भिक र अपूरो हुँदै गएको छ । उदारवादको जन्मभूमि युरोपमै अहिले प्रज्ञातन्त्र कमजोर देखिएको छ ।
ब्रेक्जिटसँगै युरोपीयन युनियन सङ्कटमा फँसेको छ । जातिवाद, लोकप्रियतावाद र आप्रवासी घृणा संसारको नाइके मानिएको अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बोली–वचनमै देखिन्छ । पश्चिम अघिल्लो शीतयुद्ध जस्तो एकजुट छैन । उनीहरू आत्मकेन्द्रित भइरहेका छन् । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनको भ्रमण गरेपछि भएको सम्बन्ध सुधारबाट उत्साहित चीनले विगत ५० वर्षमा आश्चर्यजनक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरबाट भएको यस पहलबाट आफू साम्यवादी हुँदाहुँदै तत्कालीन सोभियत संघ गठबन्धनमा नजाने सहमतिपछि अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध कायम भएको थियो । यो पिङपङ कूटनीतिपश्चात अन्तर्मुखी चीनले पश्चिमसँग प्रविधि र व्यापारमार्फत आफ्नो सुधार कार्यक्रम अगाडि बढायो । देङको चिनियाँ चरित्रको समाजवादसँंगै शास्त्रीय साम्यवाद त्यागी राज्य पुँजीवाद लागू गरेर विगतका दशकमा चीनले ७० कडोर जनतालाई गरिबीबाट मुक्त तुल्यायो ।
आधा औद्योगिकीकरण गर्‍यो । अब ऊ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । हरेक वर्ष हुने सैन्य खर्च अमेरिकाभन्दा चीनको कम छ । तत्कालमा चीन कसैसँंग पनि युद्ध चाहँदैन । तर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले स्थापित शक्तिलाई उदाउँदो शक्तिले चुनौती दिनथालेपछि त्यहाँ स्वतः युद्ध हुने सिद्धान्त थुसिडेडिस ट्रापको अविष्कार गरेका छन् ।
प्राचीन ग्रीकका इतिहासकार थुसिडेडिसले कसरी एथेन्स र स्पाटा स्थापित र उदाउँदो शक्ति हुँदा युद्धमा गए भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन् । त्यसरी स्थापित शक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनबीच पनि त्यस्तै युद्ध हुने संकेत उनले गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा ठूला द्वन्द्व भएका छैनन् । तर त्यस्तो द्वन्द्व यी दुई राष्ट्रबीच हुनसक्ने अनेकौं सम्भावना छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक मामलाका केही जानकारहरू अमेरिकालाई चीनले युद्धबिना विस्थापित गर्न नसक्ने मत राख्छन् । चिनियाँहरू भने आफ्नो राष्ट्रको उदय दोस्रो विश्वयुद्धताका भएको जर्मनी र जापानको जस्तो हिंसात्मक नहुने बताउँदै आएका छन् । बेलायतबाट विश्व व्यवस्था सन् १९४५ मा हातमा लिएको अमेरिका त्यति सजिलै यो नेतृत्व अरुलाई सुम्पन चाहँदैन । सन्तुलन मिलाउन अहिले उसको नजर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियामाथि छ ।
यी राष्ट्रहरूलाई एक गरेर ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति अन्तर्गत चीनलाई रोक्न चाहन्छ । तर चीन भने बेल्ट र रोड अभियानमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिपरेको छ । यी दुई योजनाले अमेरिका र चीनलाई आमने–सामने बनाएका छन् । सात दशकसम्म विश्वको नेतृत्व लिएको अमेरिका अहिले पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सैन्यशक्ति हो । तर आज संसारमा उसलाई चुनौती दिने शक्ति हरेक क्षेत्रमा चीन नै हो ।
करिब १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या र १४ राष्ट्रहरू रूस, मध्यएसिया, पूर्वी र दक्षिण एसियासँग सिमाना गाँसिएको चीनको शक्तिमा भूगोलको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व छ । यदि चीन विश्वको नेता बन्न चाहन्छ भने उसको त्यो अधिकार भएको सिङ्गापुरका नेता ली क्वान युले बताएका थिए । तर उपनिवेश, साम्राज्य र विश्वव्यापीकरणमार्फत जसरी युरोपीकरण र अमेरिकीकरण विगत चार सय वर्षमा भयो त्यस्तो चिनियाँकरण हुन असम्भव देखिन्छ ।
किनकि चीनको कुन्फुसियाली संस्कृति र एक पार्टी शासन व्यवस्था विश्वका अरु राष्ट्रहरूलाई नसुहाउने हुनसक्छ । नयाँ शीतयुद्ध भनिए पनि आजको चीन सोभियत संघजस्तो होइन । चीनको मनोविज्ञान के छ भने ऊ आफूलाई ५ हजार वर्षदेखिको शक्ति मान्दछ । आफू संसारको केन्द्रमा रहेको मध्य अधिराज्यको ग्रन्थि उसमा छ । चीनमा अहिले राष्ट्रवादको भावना बढ्दो छ ।
चिनियाँ शासकहरू आफ्नो राष्ट्रलाई महान बनाउने अभिव्यक्ति दिन्छन् । देङले आफ्नो शक्ति लुकाउ भन्थे, तर आजको चीन आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने र त्यससँग खेल्ने अवस्था छ । चार सय वर्षयता विश्वलाई विकास र आधुनिकीकरण गरिरहेको पश्चिमको अन्त्य त्यति सजिलो त छैन । तर त्यसका संकेतहरू देखिरहेका छन् । यहुदी, इसाई जातिको वर्चस्व भएको विश्वमा हान जातिले त्यसलाई चुनौती भने दिएकै हो ।
एक्काइसौं शताब्दी विशेष गरेर एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यो महत्त्व यहाँ हुने भूराजनीतिक सन्तुलनको हेरफेर, आर्थिक वृद्धि र विज्ञान प्रविधिको फैलावटका कारणले हुनेछ । जसको केन्द्रमा चीन हुनेछ । अहिले नै एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनेको चीनका लागि बाधाको रूपमा अमेरिका देखिएको छ । यी दुईबीच दक्षिणी चीन समुद्रको भूभाग, ताइवान प्रश्न तिब्बत स्वतन्त्रताको मुद्दामा द्वन्द्व हुनसक्छ ।
तर यी द्वन्द्वहरूलाई मिलाउन सकिने सम्भावना भएको टिप्पणीकार बताउँछन् । १७ औं शताब्दीमा विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति र विकसित राष्ट्र चीन अहिले आफ्नो सही स्थानको खोजीमा छ । जुन स्थान प्राप्त गर्न उसले धेरै मूल्य चुकाएको छ । तर त्यो स्थान पश्चिमाहरूको विश्व व्यवस्था विस्थापित गरेर आफू स्थापित हुने हो वा के हुने हो, त्योचाहिँ भविष्यले नै बताउँछ । प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:२३
सिकाइ उपलब्धिका चुनौती
भाद्र २८, २०७६ उमा भण्डारी
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक/डेढ महिनादेखि नै विद्यालयले परीक्षा लिन सुरु गर्छ । अनि सुरु हुन्छ, विद्यार्थी र अविभावकको तनाव खेप्ने दिन । कतिपय परिवारमा आमाबाबु र छोराछोरीबीच द्वन्द्व चर्कन्छ । अहिलेका छोराछोरी टसको मस गर्दैनन् । उनीहरूसँग जति तर्क कसैसँग हुँदैन ।
आश्चर्य लाग्छ, उनीहरूको त्यो ‘डिफेन्ड’ गर्ने तागत देख्दा । तर पनि औपचारिक अध्ययनमा भने उनीहरूलाई राम्रो अंक ल्याउन कठिन परिरहेको हुन्छ ।
पढाइमा कमजोर हुँदैमा वा घरको काम नसघाउँदैमा छोराछोरीले केही सिकेनन् भन्नेचाहिँ होइन । आमाबाबुको कमी–कमजोरी, विद्यालयको परिधि र साथीहरू कोसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ, सिकेका हुन्छन् । कुन च्यानलमा कति बजे कुन कार्यक्रम आउँछदेखि मनपर्ने हिरो/हिरोइनको लभ अफेयर र ब्रेकअपबारे कण्ठै हुन्छ । भलै, देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नाम थाहा नहोस् ।
औपचारिक सिकाइमा कमजोरी हुनुका विविध कारण हुनसक्छन् । तीमध्ये केही कारण यस प्रकार छन् ।
१. व्यस्तता : शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुनुको कारण बेवास्ते आमाबाबु, नियन्त्रणमुखी विद्यालय प्रणाली र उन्मुिक्त खोज्ने प्रवृत्तिका केटाकेटी हुन् । यी तीनबीच तालमेल ल्याउनसके बालबच्चाको सिकाइ क्षमतामा वा रुचिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षाविद कोइरालाले भनेजस्तै आमाबाबुको व्यस्तता केटाकेटी निराश पार्ने पहिलो कारण बनेको देखिन्छ । हरेकजसो परिवारका आमाबाबु कमाइ गर्न गएका हुन्छन् । छोराछोरी घरमा आउँदा उनीहरू घरमा हुँदैनन् । छोराछोरी माथिको निगरानी कम हुने बित्तिकै उनीहरूको मनोमानी बढ्दै जान्छ ।
२. गलत सोचाइ : आमाबाबु घरमै भए पनि कतिपय परिवारमा छोरीछोरालाई समय दिनु जरुरी ठान्दैनन् । पैसाको बिटो तेर्स्याएर पढ्न पठाएकै छ, अरु के गर्नुपर्‍यो भन्ने मान्यता हुन्छ । छोराछोरीको पढाइलाई पैसासँग तुलना गरेर समस्या समाधान हुँदैन । कतिपय परिवारमा नियन्त्रणमुखी अवधारणा पनि छ । हिजोको जस्तो धेरै दाजुभाइ, दिदीबहिनीको जमातमा हुर्किन नपाएको एक्लो बच्चालाई बाबुआमाले पनि उसको रुचिमैत्री व्यवहार गरेन भने ऊ साँच्चिकै एक्लिँंदै जान्छ । अनि उसले बाबुआमालाई शत्रु देख्न थाल्छ ।
३. घरायसी क्रियाकलाप : कतिपय अभिभावक आफै पनि मोबाइल वा टीभीको किरो हुन्छन् । यस्ता किराले भनेको कुरा उनीहरूका छोरीछोराले सुन्ने कुरै भएन । गृहकार्य किन नगरेको भन्यो भने तपाईंलाई मोबाइल हेर्न मनलाग्छ, हामीलाई चाहिँ लाग्दैन भनिहाल्छन् । उनीहरूसँग रेडिमेड जवाफ हुन्छ ।
४. पारिवारिक कलह : घरपरिवारमा श्रीमान/श्रीमती बीचको कलह अहिलेको समाजको अभिन्न दिनचर्या भइसकेको छ । जुन घरमा लैंगिक विभेदजन्य झैझगडा बढी हुन्छ, त्यो घरका बालबच्चा यसै पनि पीडित हुन्छन् । बाबुआमाको झगडाबाट छोराछोरीले कस्तो संस्कार सिक्छन् ? मेरा आमाबाबु खराबै हुन् भन्ने कुरा मनमा गढेको हुन्छ, जसबाट छुट्कारा पाउन वैकल्पिक मार्ग खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा आमा वा बाबुमध्ये एउटाको पक्ष लिने र अर्कोलाई घृणा गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ ।
५. साथीभाइको संगत : साथीभाइको संगतले पनि बालबच्चाको सिकाइ प्रक्रियामा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । पढ्ने साथीको संगतमा रहेका केटाकेटीले कालान्तरमा आफ्नो सिकाइलाई सकारात्मक बाटोतिर हिँडाउन सक्छन् । उनीहरूको आनीबानीमा पनि त्यस्तै खालको परिवर्तन देखिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त राम्रो पढाइमा राम्रो गर्दै गएका केटाकेटी पनि गलत बाटो समातेका साथी सर्कलमा परेर बाटो परिवर्तन गर्न पुग्छन् ।
६. पढेर के हुन्छ भन्ने मानसिकता : अहिलेको समयमा पठित बेरोजगारहरू टन्नै छन् । हरेक घरपरिवारमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिसमेत प्रमाणपत्र दराजमा थन्क्याएर अनेकतिर बाँच्नका लागि अनेकतिर भौंतारिनुपरेको सत्य हाम्रै समाजमा देखिएको छ । यसले गर्दा हाम्रा बच्चाहरूले पनि पढाइमा आफ्नो भविष्य नदेखेका हुनसक्छन् ।
पढेर के हुन्छ र ? फलानो त्यत्तिकै छ । के खान पढ्नुपर्‍यो भन्ने सोचाइ आउने गर्छ । यस्ता सोचाइलाई चिर्न पढेर के हुँदैन र भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सैद्धान्तिकको साथै व्यावहारिक शिक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ ।
शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, केही लचिलो र पारिवारिक प्रणाली केटाकेटीमैत्री हुने हो भने सी प्लस वा अव्यावहारिक भनिएका केटाकेटीहरू पनि त्यति ठूलो समस्या होइनन् । त्यसको लागि विद्यालय वा अविभावक दुबैले केही प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
प्रविधिमा आधारित गृहकार्य : अहिलेका किशोरी–किशोरलाई पढाइभन्दा प्यारो लाग्ने धेरै साधन विकास भइसकेका छन् । तीमध्ये मोबाइल वा टीभी प्रमुख हुन् । मोबाइल नभइकन अहिलेका केटाकेटी टिक्नै सक्दैनन् । प्रविधिको युगमा यो अपरिहार्य पनि भइसकेको छ । मोबाइलबाट पनि उनीहरूले धेरै ज्ञान हासिल गरिरहेका हुन्छन् । यदि कुनै विद्यार्थी मोबाइलमै बढी रुचि राख्छ, गेम खेल्छ वा कार्टुन हेर्छ भने उसलाई त्यसैबारे गृहकार्य दिए कसो होला ?
वास्तविक पात्रबारे : गृहकार्य दिन सकिने अर्को सन्दर्भ उनीहरूलाई मनपर्ने, उनीहरूलाई साह्रै जाती वा आदर्श लाग्ने वास्तविक जीवनका पात्रको बारेमा लेख्न दिने र ती पात्रका कुन–कुन कुराबाट उनीहरू प्रभावित भएका हुन्, सो उल्लेख गर्न लगाउने । यसो गर्दा उनीहरूभित्र दबिएर बसेका कुण्ठा विस्तारै प्रकट हुन्छ ।
घरायसी कामबारे : गृहकार्य दिन सकिने अर्को विषय हो, घरायसी कामबारे खोजखाज गरेर लेख्ने । जुन विद्यार्थीलाई किताब पल्टाउनै मनलाग्दैन, उसलाई त्यही किताब पढ भनेर विवश बनाउनुभन्दा घरमा आमाले खाना कसरी पकाउनु हुँदोरहेछ, के–के सामान चाहिँदो रहेछ, पकाउन कतिबेर लाग्ने रहेछ, कति मात्राको खाद्य सामग्री चाहिने रहेछ, सबै उतार्ने खालको परियोजना कार्य गर्न दिए हुन्छ ।
करेसाबारी छ भने त्यतातिर के–के पाइन्छ सोधखोज गर्न लगाए हुन्छ । अलि उमेर पुगेका विद्यार्थीलाई घरमा खाना पकाउने गृहकार्य दिए हुन्छ । सिरकको खोल नाप्ने, तन्नाको साइज नाप्ने, घरका सामान सफा गर्ने वा टल्काउने उपाय पत्ता लगाउने, खाद्य भण्डारण तरिका बुझ्ने आदि ।
यस्तो गृहकार्य दिँदा छात्र र छात्रा दुबैलाई सकेसम्म एकै प्रकारको कार्य दिन सकिन्छ, जसले गर्दा छोरी र छोरा बीचको लैंगिक खाडल पुरिन मद्दत गर्छ । यसो गर्दा बाबुआमा पनि छोराछोरीसँग सम्मिलित हुन पाउँछन् । घरको काम पनि सघाइन्छ ।
सानाबाट ठूलाले सिक्ने : बाबुआमा तथा शिक्षक/शिक्षिकाले छोराछोरी वा विद्यार्थीबाट सिक्ने बानीको विकास गरेमा विद्यार्थीमा आत्मजागरुकताको विकास हुन्छ । सानाले सिकेका कुरालाई महत्त्व दिने हो र सिक्न खोज्ने हो भने पुस्ता बीचको दूरी कम हुन्छ । कम्तीमा पनि हप्ताको एकपटक सानाले जानेका प्रविधि, पढाइ, उनीहरूले भोगेका अनुभव सुन्ने र आफू सानो हुँदाको अनुभव उनीहरूलाई पनि सुनाउने गरे केटीकेटाहरू निकै खुसी हुन्छन् ।
व्यावहारिक गतिविधि सम्बन्धी : व्यावहारिक जीवनमा उपयोगी हुने विद्युतीय साधनहरू, बिजुलीका बल्बहरू फेर्ने, पानीधाराका पाइपहरू मर्मत गर्ने, मोबाइल र ल्यापटप मर्मत गर्ने, बेसिनमा जमेको पानी पाइपबाट निकास गराउने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने, गमला वा करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्ने, तरकारी केलाउने, सर्टको टाँक सिलाउने, प्रेसर कुकरहरू मर्मत गर्ने, इमर्जेन्सी फोनकल संकलन गर्ने लगायतका काम विद्यालयले परियोजना कार्य अन्तर्गत गराउन सक्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूमा व्यावहारिक ज्ञानको आत्मविश्वास बढ्छ ।
घुमघामको वातावरण : घरमा पनि बाबुआमाले आफ्ना बालबच्चालाई फरक–फरक स्थानमा घुमाउन लैजान सक्छन् । यसो गर्दा बालबच्चामा नयाँपन आउँछ र पढ्ने स्फुर्ती पनि बढ्छ । घुमेका ठाउँबारे लेख्न वा चित्र बनाउन लगाउन पनि सकिन्छ ।
उनीहरूले गरेका ससाना कुरालाई पनि ताली बजाइदिने, स्यावास भन्ने, उनीहरूलाई खान मनलागेका खानेकुरा, लाउने कुरा किनिदिने, घरायसी समस्याबारे अवगत गराउने गर्नाले पनि कालान्तरमा केटाकेटीहरू सकारात्मक सिकाइतर्फ अग्रसर हुन सक्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:२२